Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny pregabalin - Buyaas
Pregabalin (148553-50-8) dia zava-mahadomelina izay amidy amin'ny alàlan'ny marika Lyrica amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia fanafody fanoherana ny epileptika izay antsoina koa hoe anticonvulsant. Ny zava-mahadomelina no ampiasaina amin'ny fanalefahana ny fiasan'ny atidoha izay mitarika amin'ny fahitana. Amin'ny lafiny iray, Pregabalin dia misy fiantraikany amin'ny zavatra simika ao amin'ny atidoha izay mandefa famantarana fanaintainana manerana ny rafi-pitatitra ao amin'ny vatana. Ny zava-mahadomelina koa dia ampiasaina amin'ny tontolon'ny fitsaboana mba hitsaboana fanaintainana samihafa ateraky ny aretina isan-karazany toy ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny tsimokaretina vokatry ny fibromyalgia, diabeta, ary na dia ny ratra amin'ny ratra amin'ny hazondamosina.
Pregabalin (148553-50-8) dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa hanampiana ny fitsaboana ny sakam-bolongony amin'ny zaza tsy ampy taona efatra ary lehibe koa. Nandritra ny taona maro izao, ny zava-mahadomelina dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny tontolo ara-pitsaboana, ka nahatonga azy io ho iray amin'ny zava-mahadomelina mampitony fanaintainana mafy indrindra eny an-tsena. Ny zava-mahadomelina dia tokony alaina ihany alohan'ny filazan'ny dokotera hahazoana vokatra tsara kokoa. Na izany aza, ataovy antoka tsara fa hahazo ny Pregabalin amin'ny mpivarotra azo itokisana na mpanamboatra manodidina anao ianao.
Tany Etazonia Etazonia, Pregabalin dia nekena ho ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo aretina toy;
Eto, ny fatra Pregabalin voalohany dia 165mg izay tokony alaina indray mandeha isan'andro, ary atolotry ny handray azy ianao aorian'ny sakafo hariva. Misy ihany koa ny fahazoana ny fatra hitombo bebe kokoa amin'ny 330mg ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny tsingerin'ny dosage. Rehefa vita ny fanafody roa na roa herinandro ary tsy misy fanatsarana lehibe amin'ny fanaintainana, dia afaka mampiakatra ny fatra amin'ny fitsaboana avo indrindra ny 660mgs isan'andro ny dokotera. Rehefa manova ny dosage, avereno maraina ny famoahana azy avy eo dia atombohy ny fanafody famoahana fanampiny rehefa avy amin'ny sakafo hariva.
Eto dia ny fatra voalohany dia 75mg dia indroa isan'andro ary azo zahana amin'ny 150mg in-droa isan'andro ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny fatra. Ny fatra dia azo ampitomboina bebe kokoa hatrany amin'ny 225mg izay alaina indroa isan'andro. Ny fatra farany ambony indrindra ho an'ny fibromyalgia dia 450mgs ary fikojakoja fikojakojana manodidina ny 300mg mankany 450mg. Amin'ny lafiny iray kosa, ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny maka 600mgs isan'andro dia tsy manome tombotsoa fanampiny Pregabalin fa mety hiteraka vokatra ratsy.
Ny andro vitsivitsy voalohany amin'ny fatra azo omena ny dokotera anao manombatombana ny fivoaranao alohan'ny hanapahanao hevitra hanitsiana ny fatra amin'ny midina na ambony. Asehon'ireo fandinihana fa tokony hanantena valiny ianao ao anatin'ny andro vitsivitsy voalohany andiany. Pregabalin dia fanafody maimaika haingana, ary noho izany dia tokony hiandry ny fanavakavahana ny fanaintainan'ny fanaintainanao ao anatin'ny andro vitsivitsy vitsivitsy. Raha tsy mahatsapa fanatsarana ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny fatranao ianao, dia ampahafantaro ny dokotera ny manamboatra ny fatra amin'ny valiny tsara kokoa. Samihafa ny vatan'olombelona ary tsy mandeha ho azy fa maka ny vokatra haingana araka ny sitrapon'ny hafa. Miankina amin'ny toe-java-misy anao mandritra ny fitsaboana, dia hiova ny valiny. Ny sasany amin'ny mahazatra Vokatra pregabalin ahitana;
Ny tsiambaratelo amin'ny valin'ny Pregabalin kalitao dia ny fampidiranao ny dokoteranao amin'ny fizotran'ny dosage manontolo. Aza amboary ny fatra Pregabalin raha tsy mampahafantatra ny fanafodinao. Arak'izay azonao atao ny mividy mora ilay fanafody avy amin'ny fivarotana an-tserasera samihafa, dia aza manomboka mitondra izany raha tsy mandeha mijery fizahana fitsaboana. Io zava-mahadomelina io dia natanjaka tamin'ny fanamaivanana ny fanaintainana nateraky ny antony maro samihafa. Ny atleta sasany koa dia mampiasa Pregabalin mba hifehezana ny fanaintainan'ny hozatra, ary ny fanaintainan'ny ratra amin'ny hazondamosina, izay fahita amin'ny fanazaran-tena sy ny fifaninanana.
Ity dia fanafody maimaim-poana miaraka amin'ny mavitrika Fiafarana Pregabalin amin'ny ora 6. Noho izany, ho an'ny vokatra Pregabalin tsaratsara kokoa, dia tokony hizara roa na telo isan'andro ny fatra. Ny maha-zava-mahadomelina am-bava dia manamora ny fahazoanao valiny satria manana famongorana fohy fohy izany. Aza hadino hatrany ny mifikitra amin'ny toromarika nomen'ny dokotera anao. Na dia maka fatra farany ambany na ambony indrindra aza ianao, ny atsasaky ny zava-mahadomelina dia mitovitovy.
Tahaka ny fanafody hafa eo an-tsena ankehitriny, Pregabalin dia afaka mampibaribary anao amin'ny voka-dratsy mahery vaika raha overdose ianao. Ny ankamaroan'ny Vokatry ny pregabalin dia vokatry ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy na indraindray rehefa tsy mihetsika manoloana ny zava-mahadomelina ny rafi-batanao. Izany no antony tokony ilazana hatrany ny hanombohana miaraka amin'ny fatra ambany, izay azo amboarina amin'ny fanafody anao aorian'ny fanaraha-maso ny fomba fihetsiky ny vatanao ny fanafody. Ny sasany amin'ireo fiantraikany mahazatra amin'ny Pregabalin dia misy;
Ny vaovao tsara dia izao: azo fehezina ireo lafiny rehetra eto Pregabalin raha mampahafantatra ny dokotera ianao amin'ny fotoana na dia mety hanjavona miaraka aza ny toe-javatra sasany rehefa mahatsapa ireo vokatra mandroso voalaza etsy ambony ianao fa tsy manohy ny fatrany raha tsy mampahafantatra ny fitsaboana anao. Ny dokotera dia afaka manapa-kevitra ny hampitsahatra ny fatra raha tsy voafehy ny tarehin-javatra na manome soso-kevitra fanafody azo antoka azo antoka kokoa ho anao.
Afaka mora ianao mividy vovony Pregabalin amin'ny ampahany be na ampy fotsiny ho an'ny tsingerinao amin'ny dosage avy amin'ny fivarotana an-tserasera samihafa na amin'ny fivarotam-panafody akaiky indrindra satria ara-dalàna amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Ny dokotera koa no ho olona mety hampiseho aminao ny toerana hividianana azy. Izany dia manamora ny fividianana sy fampiasana ny zava-mahadomelina tsy misy tahotra amin'ny fifanolanana amin'ny lalàna.
Raha jerena ireo valiny marobe Pregabalin dia mazava fa mpampiasa maro no afa-po amin'ny valiny azony rehefa alaina ny zava-mahadomelina. Pregabalin dia ampiasaina tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fanafody fanasitranana fanaintainana, ary nahazo valiny tsara avy amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Ny mpikaroka ara-pitsaboana dia nametraka ihany koa ny tsikera samihafa, ary izany no antony naneken'ny FDA azy hampiasana ny fitsaboana amin'ny Epilepsy, Post-herpetic neuralgia na fanaintainana mitranga aorian'ny fanaintainana, fanaintainan'ny neuropathie amin'ny diabeta ary Fibromyalgia.
Miova izao tontolo izao, ary anio dia azonao atao Buy Pregabalin powder an-tserasera amin'ny sehatra eto amintsika amin'ny vidiny mora. Sariaka ny tranonkalanay, ka mora aminao ny mifehy avy amin'ny vokatra iray mankany amin'ny iray hafa ary koa manao ny baikonao ao anatin'ny segondra. Azonao atao ny miditra amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny smartphone, tablette, na amin'ny solosainao ihany koa. Ankoatr'izay dia manao fanafahana manerana an'izao tontolo izao sy ao anatin'ny fotoana fohy indrindra isika. Azonao atao ny mividy Pregabalin am-pitoviana na ampy fotsiny amin'ny tsingerinao amin'ny dosage.
Izahay no mpamatsy Pregabalin be indrindra any amin'ny faritra, ary ny vidin-javatra azontsika atao dia tsy mampandefitra ny kalitaon'ny vokatra vokarintsika. Manolotra vokatra ara-pitsaboana marobe isan-karazany ao amin'ny magazay an-tserasera izahay. Na izany aza, manoro hevitra hatrany ny mpanjifanay rehetra izahay mba hiantohana azy ireo fa manao fitsirihana ara-pitsaboana alohan'ny hanombohan'izy ireo ny entanay. Ny vokatra momba ny fitsaboana anay dia mety hiteraka voka-dratsy rehefa diso tafahoatra na overdosed. Pregabalin amidy azo alaina ao amin'ny fivarotam-panafody akaiky anao fa ho azo antoka fa hahazo izany avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Tsy ny tranombarotra ara-pitsaboana an-tserasera na ara-batana daholo no manolotra vokatra kalitao.
Na izany aza, Pregabalin (148553-50-8) dia tsy nekena amin'ny fitsaboana ny fanahiana any Etazonia, na dia misy aza ny tatitra fa ny mpampiasa sasany dia mampiasa azy io tsy misy marika mba hifehezana ny fepetra. Amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao toa any Eropa, Pregabalin dia nekena tamin'ny fikarakarana ny tebiteby amin'ny olon-dehibe. Misy ihany koa ny tatitra tsy voamarina fa Pregabalin dia azo ampiasaina mba hifehezana ny fahaketrahana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba Pregabalin, mifandraisa amin'ny dokotera anao na manontanio amin'ny pharmacist anao.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Ny toetran'ny fitsaboana sy ny fanafody ampiasain'ny marary fibromyalgia dia amitriptyline, endxetine, gabapentin, na pregabalin. Fikarakarana arthritis & fikarohana, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin sy pregabalin amin'ny fanaintainana — dia mitombo ve ka manisy marika ny ahiahy ?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Fahombiazan'ny Pregabalin amin'ny fanaintainan'ny fanaintainana postoperative eo ambanin'ny sokajy fandidiana samihafa: famakafakana meta. fitsaboana, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin ho an'ny fitsaboana ny aretin-koditra mahazatra: fanavaozana. Aretina sy fitsaboana amin'ny neuropsychiatric, 9, 883.